Ch 10 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 10 Luke
10:1 Avy eo, Rehefa afaka izany,, ny Tompo voatendry hafa koa fito-polo-roa. Ary Izy naniraka azy tsiroaroa hialoha Azy, any amin'ny tanàna sy ny tany izy, ary tonga.
10:2 Ary hoy Izy taminy:: "Tokoa ny vokatra lehibe, fa ny mpiasa no vitsy. Noho izany, mangataka ny Tompon'ny vokatra mba haniraka mpiasa hijinja ny vokatra.
10:3 Mivoaha. Indro, Izaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny amboadia.
10:4 Aza misafidy ny hitondra kitapom-bola, na vatsy, na kapa; ka dia ho hiarahaba tsy misy olona teny an-dalana.
10:5 Ary izay trano dia efa niditra, dia lazao aloha hoe, 'Fiadanana ho amin'ity trano ity.'
10:6 Ary raha misy zanaky ny fiadanana no, ny fiadanana dia hitoetra eo aminy. Fa raha tsy, dia hiverina aminao.
10:7 Ary hitoetra ao amin'izany trano izany, mihinàna sy misotroa izay zavatra izay ao aminy. Fa ny mpiasa dia miendrika hahazo ny karamany. Aza misafidy ny handeha isan-trano.
10:8 Ary Ary izay tanàna efa niditra ary noraisiny anao, hano izay aroso eo anoloanareo.
10:9 Ary hanasitrana ny marary izay ao amin'io toerana io, ary torio aminy, 'Ny fanjakan'Andriamanitra Efa manakaiky anareo.'
10:10 Fa ho any an-tanàna izay efa niditra ka tsy nandray anao, ka nandeha ho any amin'ny arabe lehibe, milaza:
10:11 'Na ny vovoka izay miraikitra ho anay avy amin'ny tanàna, dia hamafa ny hiampanga anareo. Mbola nahalala izany: ny fanjakan'Andriamanitra efa manakaiky. '
10:12 Lazaiko aminareo, fa amin'izany andro izany, Sodoma dia ho voavela amin'izany tanàna izany mihoatra noho ny ho.
10:13 Lozanareo, ry Korazina! Lozanareo, Betsaida! Fa raha ny fahagagana izay efa nataony teo amin'ny aminao, efa nanao tany Tyro sy Sidona, dia ho efa nibebaka ela, mipetraka amin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona.
10:14 Na izany aza tena, Tyro sy Sidona dia ho voavela heloka bebe kokoa amin'ny andro fitsarana noho ianao dia ho.
10:15 Ary ny aminareo, Kapernaomy, iza no hasandratra ho any an-danitra aza ka: dia ho anaty rano any Hell.
10:16 Na iza na iza mihaino anao, mihaino ahy. Ary na iza na iza manamavo anao, maniratsira ahy. Ary na iza na iza manamavo ahy, maniratsira Izay naniraka Ahy. "
10:17 Ary ny fito-polo-roa niverina tamin'ny fifaliana, nanao hoe:, "Tompo ô, na dia ny demonia aza dia manaiky anay, amin'ny anaranao. "
10:18 Ary hoy Izy taminy:: "Aho nijery i Satana latsaka toy ny tselatra avy any an-danitra.
10:19 Indro, Efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka, sy ny rehetra ny herin 'ny fahavalo, ary tsy hisy tsy hampaninona anareo.
10:20 Na izany aza tena, Tsy misafidy ny hifaly amin'ny ity, fa ny fanahy dia manaiky anareo; fa mifalia, ny anaranareo voasoratra any an-danitra. "
10:21 Amin'izany ora izany, dia niravoravoan'ny ao amin'ny Fanahy Masina, ka hoy Izy:: "No ekeko ho anao, Ray, Tompon'ny lanitra sy ny tany, satria efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny mahira-tsaina, ary, fa nahariharinao tamin'ny zaza amim-behivavy. Izany no izy, Ray, satria izany no ankasitrahana eo anatrehanao.
10:22 Ny zavatra rehetra dia efa natolotry ny Raiko ahy. Ary tsy misy mahalala ny Zanaka, afa-tsy ny Ray, ary ny Ray dia, afa-tsy ny Zanaka, ary ireo izay efa nifidy ny Zanaka hanehoana Azy. "
10:23 Ary nitodika tamin'ny mpianany, hoy izy:: "Sambatra ny maso mahita izay hitanareo.
10:24 Fa lazaiko aminareo, fa maro ny mpaminany sy ny mpanjaka naniry hahita ny zavatra hitanareo, Ary tsy mahita azy, ary naniry handre izay renareo izay, ary izy ireo dia tsy hihaino azy. "
10:25 Ary indro, dia nisy manam-pahaizana manokana ao amin'ny lalàna nitsangana, naka fanahy Azy ka nanao hoe:, "Mpampianatra, inona no tokony hataoko mba handova ny fiainana mandrakizay?"
10:26 Fa hoy izy taminy:: "Inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana no famakinao azy io?"
10:27 Ho setrin'izany, hoy izy:: "Tiava an'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo, ary avy amin'ny tenanao manontolo, ary avy amin'ny rehetra ny herinao, ary ny sainao rehetra, ary ny namanao tahaka ny tenanao. "
10:28 Ary hoy izy taminy:: "Marina ny navalinao. manao izany, dia ho velona ianareo. "
10:29 Fa satria izy te-hanamarina ny tenany, dia hoy izy tamin'i Jesosy, "Ary iza moa no namako?"
10:30 Avy eo Jesosy, maka izany ho, nanao hoe:: "Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko, ary dia nitranga teo jiolahy, izay ankehitriny koa nandroba azy. Ary fampijalian azy amin'ny ratra, dia lasa nandeha, nandao azy tao ankoatry, antsasaky ny velona.
10:31 Ary nony fa nisy mpisorona anankiray nidina teny an-toy izany koa. Ary nony nahita azy, dia nandalo.
10:32 Ary toy izany koa ny Levita, raha efa akaiky ny toerana, koa nahita azy, ary nitsangantsangana teny.
10:33 Fa nisy kosa Samaritana anankiray, satria nisy nalehany, dia nanatona Azy. Ary nony nahita azy, dia nifindra ny famindram-po.
10:34 Ary nanatona azy, dia nofeheziny ny feriny, sady nasiany diloilo sy divay azy. Ary nilentika teo amin'ny biby ny entana, dia nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny, ary dia nikarakara azy.
10:35 Ary ny andro manaraka, dia naka denaria roa, ary nomeny azy ireo ny tompon'ny, ka hoy Izy:: 'Tsaboy izy. Ary na inona na inona fanampiny ianao efa nandany, Izaho no hamaly ho anareo amin'ny miverina aho. '
10:36 Iza moa amin'izy telo lahy, no toa anao, dia mpiara-belona aminy, izay latsaka teo amin'ny jiolahy?"
10:37 Dia hoy izy:, "Izay nanao famindram-po aminy." Ary hoy Jesosy taminy, "Mandehana, ary hanao toy izany koa. "
10:38 Ary nitranga fa, raha mbola nandeha, dia niditra tao amin'ny tanàna anankiray. Ary nisy vehivavy anankiray, atao hoe Marta, nandray Azy ho ao an-tranony.
10:39 Ary izy nanana rahavavy, atao hoe Mary, izay, raha nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo, nihaino ny teniny.
10:40 Ary i Marta busying foana ny tenany amin'ny fanompoana. Ary nijanona izy ka nanao hoe:: "Tompo ô, Tsy misy mampanahy anareo fa efa nandao rahavaviko ahy hanompo irery? Noho izany, miteny ho azy, ka mety hanampy ahy izy. "
10:41 Ary Jehovah namaly amin'ny filazana azy: "Marta, Marta, ianao maro ahina sy misamboaravoara ny zavatra maro.
10:42 Ary na ihany zavatra iray loha no ilaina. Maria no efa nifidy ny anjara tsara indrindra, ka dia tsy ho halaina aminy. "